Maltese Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Loading ... Kubva munaKurume 2018 ese mafomu ekubhejera zviri pamutemo muMalta. Malta Gaming Authority (MGA) ndiro rinodzora rinotarisira manejimendi ese kuMalta. Parizvino munyika mune sarudzo hombe yekubhejera kwakasiyana: makasino, makasino echikepe, rotari, dzimba dzebingo, michina yemitambo uye makwikwi enguva dzose pamitambo yehunyanzvi.
Chikamu chepamhepo kubhejera ndechimwe chezvikamu zvinokurumidza kukura zvemitambo muMalta, uye zvichiteerana nezvakarayirwa nemitemo yekutamba kure. Yekutanga saiti online kubhejera muMalta kwakatangwa mu2000 uye yaiita online mitambo kubheja. Muna Kubvumbi 2004, nyika yakanga yapinda mudare repamutemo inodzora indasitiri yese yemitambo online Malta ndiyo yaive yekutanga nyika nhengo yeEU, iyo nzvimbo yekudzora zvizere pamhepo kubhejera. Nekuda kweizvi Malta yakatanga kuburitsa marezinesi evapi online evanenge ese marudzi ekubhejera. Vamwe vevanonyanya kuzivikanwa vatengesi vemitambo inomhanya pane rezinesi remitambo muMalta, kusanganisira Mr Green, Betsson, Bet-at-home, Interwetten.
Rwokutumira Top 10 Maltese Online Casino Sites
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuMalta
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuMalta, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga kuongorora kwedu kwepaIndaneti nzvimbo dzepaIndaneti, kuti uzive zvakanakisa kutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye maikwereti okubhadhara anowanikwa kune vatambi veMalta.
Mahoridhe muMalta - inoshanya, nhabvu, gungwa, kudzidza Chirungu, uyezve iyo kasino. Chitsuwa chidiki chine zuva chiri pakati peGungwa reMediterranean chave kwete kwete chete nzira dzekutengeserana nedzemumiririri, asi zvakare mumwe wemaguta makuru ehupenyu hwekubheja muEurope. Ngatitangei kujairana!
Malta - muchidimbu nezvenzvimbo uye nhoroondo;
Kasi-based casinos munyika ino panguva ino inotongwa;
Nzvimbo dzinonyanya kuzivikanwa pasi-based casinos muMalta uye maitiro avo:
Makasino epamhepo ari pamutemo munyika, anozivikanwa kwazvo. Malta ingangove iri pakati peiyo huru online kasino munyika;
Zvitsva zvishanu zveguta guru reMalta Valletta nekero;
Nzvimbo yeMalta uye mhemberero yezvakaitika kare
Malta kana iyo Republic yeMalta - chitsuwa chiri muMediterranean Sea, kumaodzanyemba kweSicily, iyo inowanzoonekwa seyakagwinya Shard UK. Zita rake rakanaka iro nyika inogamuchirwa kubva kuvaFenikiya, mutauro uyo malat unoshandura se "pekugara".
Kunyangwe nzvimbo yechitsuwa iri diki, nhoroondo yakapfuma zvisingaite. Uye izvi hazvishamise, nekuti Malta iri pamharadzano yenzira dzinobva kuEurope kuenda kuAfrica neAsia. Muzana ramakore VIII BC. e. VaFenikiya nemaGiriki vakauya pasi pano. Kwemazana emakore, iyo nyika yakapfuura kuenda kuCarthaginians, maRoma, maByzantine, maArabhu, maNorman, maSpanish, maBritish. Kuzvitonga kuzere kubva kuGreat Britain nyika kwakagashirwa chete muna 1964.
Guta guru reMalta ndiro Valletta, rakatangwa neChirongwa cheMalta uye inonzi zita remutungamiri wayo, Jean de La Valletta, kudzivirira guta kubva kuTurkey.
Nhasi Malta inyika yeparamende inotungamirwa neMutungamiri Marie Louise Coleiro Preca. Chinzvimbo chemutungamiriri ndecheJoseph Muscat.
Chitsuwa chinonakidza nguva dzose vanofara, vanobhejera vanhu vanofarira casino, kwete chete.
Casino uye kubhejera muMalta
Malta ndeimwe yenzvimbo dzinodikanwa dzevabhejeri, kufamba-famba pasirese. Zvichiri kudaro! Mushure mezvose, munzvimbo diki ingori 316 mativi emamita. 4 km kubva kuGreat Casino: Oracle Casino, Dragonara Casino, Casino di Venezia, Casino kuPortomaso.
Yese imba yekubhejera ine yayo nhoroondo uye tsika. Yechokwadi: yega kasino inzvimbo huru yekutamba Roulette, Blackjack, Caribbean Poker, Stud, Texas Hold'em, Three Card Poker, point blank, French kana yemagetsi roulette uye akawanda slot michina.
MuMalta vanobvumidzwa kutamba makore gumi nemasere. Izvo chete zvinosarudzika vagari venyika pachayo, iyo inogamuchirwa kukasino kuvhura ne18. Pakushanya kwekutanga kwevaenzi iva nechokwadi chekubvunza pasipoti, saka inobhadhara kuitora naye.
VaMalta vakavimbika kune kodhi yekupfeka, saka ngatirongedze zvipfeko zvakangwara / zvisina kujairika. Hazvibvumirwe chete mumasutu ekushambidza, uye mushure me20-00 - mune zvikabudura nehembe rakavhurika neshangu. Asi kunyangwe ivo vaenzi vakapfeka vasina chimiro, unogona kupinda mukati, zvakakwana kuroja pano bhachi netayi. Zvinocherechedzwa kuti vatengi mumanheru vanopfekedza ese eMalta makasino anopa mahara ekufambisa.
Iyi nzvimbo inonziwo demokarasi kasino. Iri munzvimbo yeSt Paul Bay kuchamhembe kwechitsuwa ichi chikamu cheDolmen Resort Complex 4 * - ndiyo imwe yeakanakisa mahotera epasirese. Nzvimbo dzeDemocratic ndeyekuti kana kurasikirwa kwekasino kuchidzoka kubva pagumi kusvika pamakumi maviri muzana huwandu.
Aya ndiwo makasinasi ekutanga akaonekwa muMalta, yakavhurwa muna 1964. Chivako ichi chakura kwazvo - chakavakwa muna 1870. Kare, kwaive kugara kwaEmmanuel Scicluna, mubhengi. Dragonara Casino iri mumoyo wehupenyu hwehusiku, nekuti izvo zviri muSt Julian's.
Iyi kasino inoyevedza kubva pamaminetsi ekutanga echivako chenhoroondo - imba yemutungamiriri, yakavakwa naVaKnights veSt.John muna 1685. Vashanyi vanogona kunakidzwa nekuona kwakanaka kweGrand Harbor kana kutora kufamba munzira yekufambisa Vittoriosa. Iyo nhurikidzwa nhatu-ensemble yakasarudzika, mukati meimwe nzvimbo yakakosha inopihwa girazi reMurano, machira, machira makuru uye fenicha yekare.
Iyi kasino chikamu chemhando yepamusoro yeSt.Julian's, imba yepamusoro penthouse uye mashanu-nyeredzi dzimba, yayo yekudyira, hotera yeHilton nenzvimbo dzekutengesa. Zvakare, kana iyo casino diving Center.
Mitambo yeIndaneti muMalta
Zvinodiwa nevanhu kubhejera Malta, imhaka yekuti ipapo zviri pamutemo online kasino. Pano, munhu wese anogona kuwana rezinesi rekugadzira yavo yega yekubheja saiti, asi kwete hazvo iri yekambani yeMalta. Zvese zviitiko zvezvemari zvinofanirwa kuitwa Maltese opareta.
Iyi rusununguko inotsanangura kuti sei nzvimbo dzeMalta dzine michina yekukwevera, roulette nemitambo yemakadhi zvakanyanya kudarika chero imwe. Amateurs anotamba nemari vasina kusiya komputa yako, ivo vanofara. MuMalta, inovimbiswa zviri pamutemo, zvakanaka uye zvakachengeteka.
Zvechokwadi, Malta iye zvino ndiyo inzvimbo huru yemakasinisitiri eInternet munyika.
Muzinda waTenzi Mukuru. Kero: Palace Square / Street Republic, Valletta. Iyi nhare iri mumoyo weLa Valletta, ndiwo moyo wepakati penhoroondo. Pano ndipo panogara paramende nemutungamiri wenyika.
Cathedral yaSaint John. Nzvimbo: St Lucia's Street, Valletta. Kuvakwa kwechechi huru, yakavakwa nekuraira kwaJean de la Kassera kunofanana nenhare. Kuvaka kwakatanga mushure meGreat Siege yeMalta. Pfuma huru ipendi naCaravaggio. Izvo zvinonakidza kuongorora matombo emakuva e Knights.
National Archaeological Museum. Kero: Triq Ir-Repubblika, Valletta. Sezvineiwo chivakwa chemu Museum - imba yezana ramakore rechi 16 Auberge de Provence pamwe chete nechiratidziro, umo mune zvakawanikwa zveNeolithic nguva (5000 BC) uye zvakakosha zvigadzirwa.
National War Museum. Nzvimbo: St. Fort. Elmo, Valletta. Iyo miziyamu inogara mune yaimbova pfuti yekuchengetera, kazhinji mumafirimu enhoroondo akagadzirwa nezveMediterranean. Malta yakasarudzika mafoto 1941-1943 makore, inoratidza chitsuwa ichi chiri matongo.
Manoel Theater. Kero: 115 Triq iyo-Teatru l-Antik, Valletta. Iyo ndiyo yemitambo yekare kwazvo munyika, yakavakwa muzana ramakore rechi18 nekurairwa kwaGrand Master Manoel de Vilho. Pano pane zvakachengetwa kuunganidzwa kwemaseti, zvipfeko uye pendi.
Chokwadi chinofadza pamusoro peMalta uye chiMalta
Malta haina nzizi nemakungwa, uye mamwe matsime emvura yakachena. Mvura yese yekunwa inotengwa kunze kwenyika.
Tourism - imwe yembiru dzehupfumi.
Traffic paMalta yeruboshwe ruoko traffic.
Pachivako kune zvisiri mhosva.
MuMalta, hazvigoni kurambana.
Yunivhesiti yeMalta ndeimwe yekare kudarika munyika, inoshanda ne1592.
Padzimba pamba zviratidzo zvine mazita edzimba.
Pakati peSicily neMalta 93 km, asi munguva yakapfuura pakati pezvitsuwa paiva bhiriji.
Malta pamepu yeEurope
0.1 Kubhejera kuMalta
0.2 Rwokutumira Top 10 Maltese Online Casino Sites
2.1 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuMalta
3 Kubhejera kuMalta
3.0.1 Nzvimbo yeMalta uye mhemberero yezvakaitika kare
3.1 Casino uye kubhejera muMalta
3.1.0.4 Casino kuPomomaso
3.2 Mitambo yeIndaneti muMalta
3.2.1 Valletta dzakanaka
3.2.2 Chokwadi chinofadza pamusoro peMalta uye chiMalta
3.2.3 Malta pamepu yeEurope
sirivha oak hapana dhipoziti bhonasi